दीपकको चलचित्रमा विपिन ? « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
दीपकको चलचित्रमा विपिन ?
एक समय हिट चलचित्रका ग्यारेन्टी मानिने दीपक श्रेष्ठ ७ वर्षपछि निर्देशनमा फर्किने भएका छन् । उनले नयाँ चलचित्रका लागि मुख्य अभिनेताको प्रस्ताव विपिन कार्कीलाई गरेका छन् । अहिले विपिनले चलचित्रको स्क्रिप्ट पढिरहेका छन् । श्रेष्ठ, विपिन कार्कीले चलचित्र गर्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । उनले गाउँघरमा बस्ने नेपालीहरुको वास्तविक कथालाई पर्दामा उतार्न लागेको बताए ।
कोरोनाको स्थिति सामान्य भएपछि चलचित्रको छायांकन सुरु गर्ने तयारीमा उनी छन् । चलचित्रको नाम भने गोप्य राखिएको छ । लामो समय निर्देशनबाट टाढा रहनुको कारणबारे दीपक श्रेष्ठले भने- ‘म निर्देशनबाट कहिल्यै टाढा थिइनँ । न त निर्देशनमा फर्किन नै लागेको हुँ । फर्किनलाई त छाडेको हुनुपर्‍यो नी ! समय, काल, परिस्थितिका कारण केही समय चाहिँ लागेको हो ।’
केही चलचित्रमा अभिनय समेत गरेका उनी नेपालमा सिक्वेल चलचित्र निर्माणको सुरुवात गर्ने पहिलो निर्देशक हुन् । उनी निर्देशित चलचित्र ‘पापी मान्छे २’ नेपालमा निर्माण भएको पहिलो सिक्वेल चलचित्र हो । ‘पहिलो पहिलो माया, तकदिर, भाई, पर्खि बसेँ, हिम्मत, हिम्मत २, सुर्य चन्द्र, वचन’ जस्ता चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका उनी व्यवसायिक रुपमा सफल निर्देशकमा गनिन्छन् ।